healthy benefits – Page6– Healthy Life Journal
နံရံတွင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်း မြှင့်တင်ထားသည့် ကျင့်စဉ်
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်မြှင့်ပြီး အချိန် ၁၅ မိနစ်ခန့် နေတာကြောင့် အောက်ပါကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ကိုယ်နေဟန် ကြည့်ကောင်းစေခြင်း သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေခြင်း အစာကြေညက်စေခြင်း နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးစေတဲ့နည်းနဲ့ နှလုံးကို ကျန်းမာစေခြင်း အာရုံကြောစနစ်ကို တည်ငြိမ်စေခြင်း စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေခြင်း အမျိုးသမီးများရရှိမည့်...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့် အလှအပအတွက် ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးများ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် အသားအရေကိုသာမက ကိုယ်နေဟန်နဲ့ ခါးအရွယ်အစားတွေကိုပါ ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ နုပျိုသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်စေခြင်း လေ့လာမှုတွေအရ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကြောင့် အသက်ကြီးတဲ့အထိ ခန္ဓာကိုယ်က ငယ်ရွယ်သူတွေလိုပဲ ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ ကိုယ်နေဟန်ထား ကောင်းမွန်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် အရိုးတွေကို...
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ အပြောင်းအလဲ ၁၀ မျိုး
(၁) ဆော်ဒါ မသောက်ပါနဲ့။ (၂) အဆင်သင့်စာ စားတာကို ရှောင်ပါ။ (၃) သစ်သီးဝလံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပါ။ (၄) ရေများများ သောက်ပါ။ (၅) လမ်းလျှောက်ပါ။ (၆) စိတ်တိုဒေါသထွက်စရာတွေကို စွန့်ထုတ်လိုက်ပါ။ (၇) ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဝါသနာကို...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကညွတ်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး စားနေကြပေမယ့် ကညွတ်မှာ ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ သိချင်မှ သိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကညွတ်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တိတိကျကျ...
Vitamin B2 သောက်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. Vitamin B2 သောက်ပါက မည်သည့်ကျန်းမာရေးကို မည်သို့အကျိုးရှိသည်ကို သိလိုပါသည်။ U Than Myint (FB) A. ဗီတာမင် B2 အကြောင်း မပြောခင်...
နေကြာစေ့စားတာကြောင့် ဘယ်လိုကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲ . . .
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နေကြာစေ့စားတာကြောင့် ရရှိစေနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောကို လျော့ကျစေတာ၊ ရောင်ရမ်းမှုကို တားဆီးပေးတာ၊ သွေးကြောတွေကို သန့်စင်စေတာ စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေတာကြောင့် အာဟာရရှိတဲ့ သရေစာအဖြစ် စားပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။...
———၊ မီမိုးမေ(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တရုတ်ဆေးပညာအရ ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝနရီအလိုက် သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုထိရောက်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ နံနက် ၃ – ၅ နာရီ ထိုက်ချိကစားရန် အကောင်းဆုံးအချိန် တရုတ်ဆေးပညာအရ...
ဒိုင်ယာရီစာအုပ် ရေးခြင်း၏ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တစ်အုပ် ထားရှိပြီး နေ့စဉ်ရေးမှတ်တဲ့အခါ သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပြေလျော့သွားစေရုံသာမက တစ်နေ့တာလုပ်ရမယ့် အလုပ်ကိစ္စတွေကိုပါ ပြန်လည်မှတ်မိစေပါတယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်စေတယ် ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တစ်အုပ် ထားရှိပြီး ပုံမှန်ရေးမှတ်တာကြောင့် သင်ရဲ့တစ်နှစ်တာ ရည်မှန်းချက်၊ ဘဝပန်းတိုင်...